ESRI weputara otu mbipụta iji mee ka GIS nwee ike iru ụmụ akwụkwọ mahadum - Geofumadas
Machị, 2012 ArcGIS-ESRI, Akụziri CAD / GIS
Esri na-enye ụmụ akwụkwọ Akwukwo maka umu akwukwo, mbipụta pụrụ iche nke nwere ọganihu kachasị ọhụrụ na ọganihu na teknụzụ nkà mmụta nchịkwa ụwa ma jiri ya na ụmụ akwụkwọ mahadum.
Ịga n'ihu iji nkà ihe ọmụma Esri na mahadum na mkpa pụrụ iche na ọnọdụ nke ụmụ akwụkwọ mere Esri ka ọ bụrụ gịAkwukwo maka umu akwukwo, ngwa oru puru iche nke n’eme ka imeputa oru ngo, oru klas na ime nchoputa site na iji map, data na ozi obodo. Ihe ngwọta a na-eme ka ohere nke isoro ndị ọrụ ndị ọzọ kerịta ọrụ na-enweghị mkpa maka mmepe na iji ozi dị ugbu a site na ịwụnye ngwaọrụ na kọmputa ọ bụla.
"Ndị na-amụ akwụkwọ maka ọganihu bụ ọganihu na mmekọrịta ụmụ akwụkwọ na GIS na ọmụmụ ihe ha, ihe ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ. Na Akwukwo maka umu akwukwo ụmụ akwụkwọ ahụ agakwaghị enwe ịdabere na ìgwè University, ma ha ga-enwe ike ịrụ ọrụ site na nke ha. Ọ bụ ohere dị ukwuu maka ụmụ akwụkwọ kọleji nile na-arụ ọrụ na GIS, ebe ọ bụ na ha ga-enwetakwu ohere inweta nkà na ụzụ a, "
ka Pedro Rico, bụ isi nke Education na Esri Spain, na-ekwu.
Nwa akwukwo ọ bụla gụrụ aha na Mahadum nwere ike ịnweta kwa afọ ArcGIS maka arụmọrụ Desktọpụ, ya na njikwa ya niile na ọnụ ala dị ala. Tụkwasị na nke ahụ, ọ ga-enwe ihe ọmụma yana ihe ndị ọzọ, tinyere seminar n'efu iji bulie iji ngwá ọrụ ahụ eme ihe.
Ịga n'ihu agụmakwụkwọ maka ArcGis maka Ụmụ akwụkwọ
N'ịmara mkpa ọ dị ụmụ akwụkwọ ka ha bụrụ ndị a zụrụ azụ na nchịkọta ozi gbasara ala, Esri na-enye ụmụ akwụkwọ ọtụtụ ihe nkwado iji nweta ọzụzụ na-aga n'ihu banyere ArcGIS: ụlọ ọrụ akụ, forums, Atụmatụ ArcGIS, vidiyo, wdg.
Iji kwado ohere na iji ụmụ akwụkwọ mee ihe na ngwaọrụ ha, Esri na-ahazi a Nzukọ Seminar kwa afọ, nke a na-enweghi n'efu ebe a na-edepụta akwụkwọ akụkọ nke ArcGIS na ihe ndị dị ugbu a dị ka igwe ojii GIS ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọzọkwa, nzukọ ntanetị, nke Esri na-ahazi, nwekwara ohere maka ụmụ akwụkwọ niile n'efu na kwa ọnwa.
More banyere teknụzụ ArcGIS
ArcGIS bụ usoro ihe ọmụma zuru ezu nke na - enye gị ohere ịmepụta, nyochaa, chekwaa ma kesaa data, ụdị, map na balloons na 3D, na - eme ka ha dị na ndị ọrụ niile dịka mkpa ha. Dịka usoro ozi, ArcGIS nwere ike ịnweta site na desktọọpụ ndị ahịa, ihe nchọgharị weebụ, na oghere igwefọn nke jikọtara na sava ngalaba, ụlọọrụ ma ọ bụ ígwé ojii calculation architectures (Cloud Computing). Maka ndị mmepe, ArcGIS na-enye ngwaọrụ ndị ga-enye ha ohere ịmepụta ngwa ha.
Na mgbakwunye, ekele ArcGIS online, azịza SaaS zuru oke, na-enye gị ohere ịmepụta maapụ amamịghe maka n'efu ma kesaa ya na ndị ọrụ GIS ndị ọzọ gburugburu ụwa dabere na teknụzụ igwe ojii.
GIS ọzụzụ maka mmadụ niile
Esri Spain na-enye nzukọ ọmụmụ ihe na nkuzi ọzụzụ maka ụmụ akwụkwọ Esri, ndị ahịa, ndị mmekọ, ndị ọrụ na ndị na-abụghị ndị ọrụ. Ọzụzụ a chọrọ inye ọha na eze na ụlọ ọrụ ihe ọmụma niile dị mkpa banyere Geographic Information Systems, yana mmelite ọhụrụ na mbido na ihe owuwu nke GIS na ígwé ojii, ka ha wee mara nke ọma uru nke ngwa ọrụ a. .
Maka ozi ndị ọzọ na Usoro Ngwudata GIS na 2012 e ederede ị nwere ike ịjụ ebe nrụọrụ weebụ http://www.esri.es/es/eventos/
Banyere Esri Spain
Esri Spain Ebumnuche ya bụ itinye aka na mmepe nke otu, na-enye ngwaahịa na ọrụ dị mma na nke ọhụụ, iji nyere ha aka ịme mkpebi ka mma. Esri nwere ahụmịhe na akụrụngwa iji gboo mkpa ndị ahịa na ngalaba dịka Nchịkwa, Mmụta, Nchịkwa, Egwuregwu, Nkwukọrịta, Nchekwa, Geomarketing, Utilities and Transportation.
Previous Post«Previous Cybernetics, nnukwu ọrụ ezumike
Next Post Sistemụ Ihe Ozi Ala site na iji Manifold GISNext »